CleanMyMac X ikozvino inowirirana neiyo nyowani Mac M1 | Ndinobva mac
CleanMyMac X ikozvino inowirirana neiyo nyowani Mac M1
louis padilla | | Mac App Store, macOS Huru Sur
Mushure mekuuya kweMac nyowani neApple Silicon processor, yave nguva yekuti zvikumbiro zviongororwe kuti zvitore mukana wavo zvizere, uye CleanMyMac X ikozvino yajoinha runyorwa rwezvinhu zvakatsigirwa zvakatsigirwa, pamwe nedhizaini nyowani.
Kana iwe uri mumwe wevane rombo rakanaka varidzi veMac nyowani ine M1 processor, pamusoro pekunakidzwa neakanakisa maficha emakomputa aya, ikozvino unogona kutora mukana izere neizvo CleanMyMac X inokupa iwe, imwe yeakanakisa mafomu ekuchengetedza yako Mac pasina kuomesa hupenyu hwako. Uye zvakare, dhizaini yayo inodzoreredzwa kuti ienderane ne aesthetics yeMacOS Big Sur, iine mavara matsva, iri nyore interface uye kubvisa zvimwe zvakawandisa zvisina kupa chero chinhu kuchikumbiro. Iyo yekumenyu menyu inobvumira kumwe kunzwisisika kufamba, uye iyo ye3D mifananidzo inoipa iyo yemazuva ano kutaridzika iyo inogara ichikosheswa pane yako nyowani Mac.
Chimwe chezvinhu zvikuru zveKachenaMyMac X kugona kusunungura nzvimbo pane rako rakaomarara dhiraivhu sezvimwe zvishoma zvimwe zvinoshandiswa zvinogona. Izvo zvakakosha kubvisa junk, asi kwete kubvisa chero chinhu chakakosha chingakonzeresa system kana zvimwe zvikumbiro kutadza kushanda. Na CleanMyMac X hauzove nedambudziko iri, uye ikozvino inoshanda kunyangwe zvirinani nekwaniso yekubvisa Universal Binaries, iwo mafaera anotendera maapplication kumhanya paMacs neIntel uye M1 processor. Neichi chishandiso iwe unobvisa izvo izvo izvo komputa yako isingade, kusunungura yakakosha nzvimbo nekungori mashoma mashoma.
CleanMyMac X zvakare ine ekuchengetedza mabasa kune yako system, kuisa imwezve dura rekuchengeteka kune izvo Apple yatove inopa nekumisikidza pane yako system. Semuyenzaniso iwe uchave unokwanisa kubvisa iyo Silver Sparrow malware, iyo yakatapura zviuru zvemaMac kutenderera pasirese kubva pamashandisirwo akatsemuka kana ekunyepera matsva kubva kumamwe maficha akadai seFlash. Ose mahara uye akabhadharwa mavhezheni eCleanMyMac X anotendera iwe kuti uongorore komputa yako, uone malware uye uibvise kana iripo. Kana iwe uchida rezinesi rinokutendera iwe kuti ushandise ino inoshamisa application pasina zvirambidzo, iwe une kunyoreswa kwe € 29,95 pagore kana € 89,95 mukutenga-kamwe-nguva. Iwe une rumwe ruzivo ku Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » CleanMyMac X ikozvino inowirirana neiyo nyowani Mac M1
Final Cut Pro inogona kutamisirwa kune yemhando yekunyorera
Apple inotenga kambani masvondo ese e3 kusvika ku4